ငွေအက်ဆေ — Steemkr
Black ကပိုက်ဆံအခြေခံအားဖြင့်အနက်ရောင်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိခဲ့ပြီးထိုငွေသည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုရှောင်ရှားရန်အဖြစ်ထို့ကြောင့်အစိုးရအနေဖြင့်ဝှက်ထားသောပမာဏဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ပိုက်ဆံ၏စုဆောင်းခြင်းစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမညီမျှမှုအဓိကသူတွေကိုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အများအပြားကအနုတ်ဂယက်ရိုက်ရှိပါတယ်။
အခုတော့မေးခွန်းအနက်ရောင်ပိုက်ဆံဤမျှလောက်များစွာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သည့်အခါထို့နောက်အဘယ်ကြောင့်အစိုးရကပြဿနာပပျောက်ရေးမှခြေလှမ်းများယူပြီးမပေးကြောင်းဖြစ်နေဆဲ? ကောင်းပြီ, အစိုးရကသို့သော်ဒီနေမကောင်းအလေ့အကျင့်၏သတင်းရင်းမြစ်ကဖယ်ရှားပစ်ရချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများထက် သာ. တန်ခိုးကြီးကြအနက်ရောင်ပိုက်ဆံတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်မှအားထုတ်မှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဝင်ငွေခွန်, ပြည်နယ်အခွန်, ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်, ယစ်မျိုးခွန်နှင့်အကောက်ခွန်တာဝန်အပါအဝင်အခွန်အမျိုးမျိုး၏ရှောင်တိမ်းမှုတွေကိုအနက်ရောင်ပိုက်ဆံထုတ်လုပ်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုမပါဘဲတတ်၏။ ဤတွင်အနက်ရောင်ပိုက်ဆံများ၏အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကကြည့်သည်:
ပို့ကုန်ကနေတဆင့်က Black ဝင်ငွေ: အနက်ရောင်ပိုက်ဆံအများကြီး၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Black ကစျေးကွက်: မှောင်ခိုဈေးကွက်အတွက်ထောက်ပံ့ကောငျးအနက်ရောင်ပိုက်ဆံအခြားအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
စတော့အိတ်စျေး: အမြတ်တစ်စာရေးစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုကုန်သွယ်ရေးမှတဆင့်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများစုမှာပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်တတ်၏။ ဒါဟာအနက်ရောင်ငွေကိုတပ်စုဆောင်းခြင်းစေသည်သောဤပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်အမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမဝင်ကော်မရှင်: အတော်များများကအစိုးရအရာရှိများအချို့န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အထွေထွေပြည်သူ့ထံမှတရားမဝင်ကော်မရှင်ယူပါ။ ဒီကနေတဆင့်ရရှိခဲ့သည်အဆိုပါဝင်ငွေအားလုံးအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
အနက်ရောင်ပိုက်ဆံပြဿနာကိုဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆက်ရှိနေသိရသည်။ ဒါဟာအစိုးရသည်ဤဖျားနာအလေ့အကျင့်၏ဒဏ်လက်မှအနေဖြင့်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်မှတစ်ဦး foolproof အစီအစဉ်ကိုအတူတက်လာသင့်ပါတယ်မြင့်မားသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
esteem good-karma about black money